भट्टराईको अपिल- निजी र तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नै भविष्य दाउमा नराखौं
काठमाडौं, २२ चैत । नेकपाका नेता तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजी र तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नै भविष्य दाउमा नराख्न अपिल गरेका छन् ।
शनिबार बालुवाटारमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् । ‘यो संकटकालीन र बिशेष अवस्था हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो आम चुनावको प्रचार अभियान होइन । जहाँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका विरुद्ध र एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारका विरुद्ध आरोप र प्रत्यारोप झै सञ्चार माध्यममा छरपस्ट नहोऔं ।’
नेकपाभित्र पछिल्लो समय पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीच मतान्तर बढ्दै गएपछि र कतिपय मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबर आइरहेको बेला उनले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । ‘यो पार्टीभित्रका मतमतान्तरलाई सार्वजनिक बहस गरेर पार्टी र मुलुकको एकतालाई कमजोर बनाउने बेला होईन, पार्टीको महाधिबेशन घोषणा भएको छैन् । समयलाई पर्खौ ।’
उनले महाधिवेशनको बेला दुई समूहबीच बहस राम्रै चल्ने संकेत गर्दै त्यतिबेलासम्म कार्यकर्तालाई कुर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले मानव जाति नै खतरामा रहेको बेला व्यक्तिको अस्तित्वलाई प्रधानता नदिन पनि आह्वान गरेका छन् । ‘मानव जाति, देश, समाज, पार्टी, परिवार र ब्यक्तिको अस्तित्व रहने कि नरहने ? मानव सभ्यता नै समाप्त हुने हो कि ? भन्ने खतरा रहेको अवस्थामा निजी र तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नै भबिश्यलाई दाउमा नराखौं,’ उनले भनेका छन् ।
उनले आफ्नो नियममा कुनै खोट नभएकोले केही गल्ती भएको भए पनि सजायँ भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘आफू बाचौं र मानव जातिको रक्षा गरौँ । एकताबद्ध होऔं,’ उनले लेखेका छन्, ‘जब ढुक्कसँग बाँचिन्छ तब कस्ले कस्लाई कार्बाही गर्ने हो गरौंला । नियतमा कुनै खोट छैन । असल मनसायले गरेका काममा भुलबस कुनै गल्ती भएको रहेछ भने सहुँला बुझाउँला ।’
घरघरमै नमाज पाठ गरी इदुल फित्र मनाइँदै, आज सार्वजनिक विदा
अमेरिकामा कोरोना भाइरस, एकैदिन ६१७ जनाभन्दा बढीको मृत्यु
तत्काल करिब दुई हजार विद्रोही कैदी रिहा गर्ने अफगानी राष्ट्रपतिको तयारी
बाँके र बर्दियाका थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहु अदालतमा उपस्थित
यस वर्ष मनसुनमा औसत वर्षा हुने
४२ जिल्ला फैलियो कोरोना, कुन जिल्लामा कति ? (पूर्ण विवरणसहित)
थप १९ जना कोरोना संक्रमित भेटिए, ४२ जिल्लामा ६०३ संक्रमित
सदरखोर जेलमा झडप, केही कैदी घाइते
फाइल फोटो काठमाडौं, ११ जेठ । काठमाडौँको कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा चौकीदार राख्ने विषयमा झडप भएको छ । चौकीदार राख्ने विषय...